Madaxweyne Xasan” dhowaan waxaa la soo dhisi doonaa xukuumad loo dhan yahay” – Radio Muqdisho
Madaxweyne Xasan” dhowaan waxaa la soo dhisi doonaa xukuumad loo dhan yahay”
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh maxamuud oo shir jaraa’id ku qabtay xafiiskiisa magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay kamid tahay soo dhaweryntii Madaxweyne Erdogan maalintii shalay loogu sameeyay magaalada Muqdisho.
Madaxweyne Xasan ayaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Muqdisho ugu mahadceliyay sida ay ugu dul qaateen culesyadii jiray mudadii booqashada Madaxweyne Erdogan iyo wefdigiisa ay ku yimaadeen magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha dalka ayaa sidoo kale u mahadceliyay Ciidamada nabadgeliyada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM sida ay u sugeen amaanka magaalada Muqdisho mudadii ay martida joogtay dalka,isagoo faray in ay sii laba laabaan dadaalada lagu xaqiijinaayo amaanka dalka,Madaxweynuhu waxaa uu Ciidamada ku amaanay sida ay ugu hortagayaan falalka guracan ee ay markasta qorsheynayaan kooxaha nabad diidka ah ee Al-shabaab.
“Aniga Madaxweynaha Turkiga arrimaha aan ka wada hadalnay waxaa ku jira in la sameeyo guddiyo ka shaqeeya hirgelinta heshiisyada la wada saxiixday, waxaan sidoo kale isla soo qaadnay in Turkiga uu ka caawiyo Soomaaliya dhismaha dowladnimada” ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya.
Mudane Xasan Sheekh Maxamuud Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale shirkiisa jaraa’id ku sheegay in dhowaan heshiisyo kale oo cusub ay labada dhinac wada saxiixi doonaan isla markaana labada dalka ay ka wada shaqeyn doonaan masaalixda iyo danaha labada dowladood.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay in booqashadii Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu shalay ku yimid dalka ay wax badan kaga duwan tahay tii sanadkii 2011-ka taas oo ay sabab u tahay dalka uusan maanta joogin meeshii sanadkaas uu joogay,isagoo intaa ku daray in Madaxweyne Erdogan uu ku farxay isbedelka wadanka uu sameeyay mudadaas kooban.
Xasan Sheekh Maxamuud Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa sidoo kale shirkiisa jaraa’id waxaa uu ku sheegay in dhowaan la soo dhisi doono xukuumad cusub oo ay ku wada jiraan dhamaan dhinacyada Soomaalida.
“Xukuumad ayaa la soo dhisi doonaa dadka oo dhan ma wada heli doonaan waxaan codsanayaa in dhamaanteena aan la shaqeyno xukuumada si dalka looga dhaqaajiyo meesha uu hadda taagan yahay isla markaana looga faa’ideysto waqtiga” ayuu sheegay Xasan Sheekh Maxamauud Madaxweynaha Soomaaliya.
Ugu dambeyntii Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ugu baaqay dhamaan siyaasiyiinta iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed isu tanaazul iyo is cafin si loo gaaro dan aan wada leenahay oo ah dowladnimo taam ah.
DAAWO-khudbadaha labada Madaxweyne ay jeediyeen shalay iyo guud ahaan safarkii Ordogaan.
Real Madrid oo Kooxda Cruzeiro Kala Soo Wareegtay Ciyaaryahan Lucas Silva “SAWIRRO”